काठमाडौं, २ पुस– नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको वाम गठवन्धनले आइतवार दिउँसो राजधानीको अन्नपूर्ण होटेलमा संयुक्त पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरेको थियो । दिउँसो २ बजेदेखि शुरु हुने भनिएको पत्रकार सम्मेलनका लागि १ बजेदेखि नै सञ्चारकर्मीहरु अन्नपूर्ण होटेलमा जम्मा भइसकेका थिए । तर पत्रकार सम्मेलन करिव १ घण्टा ढिलो गरी शुरु भयो । पत्रकार सम्मेलनको शुरुमै एमाले उपाध्यक्ष भीम रावलले संयुक्त प्रेस वक्तव्य पढेर सुनाए ।
वक्तव्य पढेर सुनाइएपछि पत्ररकारले प्रश्न गर्न पाउने भनियो । पत्रकारको प्रश्नको जवाफ दिन एमाले अध्यक्ष ओली र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड तयार थिए ।
अन्य पत्रकार सम्मेलनमाजस्तै त्यहाँ पनि पहिलोपटक प्रश्न सोध्न पत्रकार ऋषि धमला अगाडि सरे । ‘पार्टी एकीकरणपछि को अध्यक्ष बन्ने र को प्रधानमन्त्री बेन्ने ?’ धमलालले यस्तै आसयको प्रश्न ओली र प्रचण्डलार्इ सोधे ।
धमालाको प्रश्न सुनेर मञ्चमा बसेका ओली, प्रचण्डलगायत सबै नेता मुस्कुराए । धमलाको प्रश्नमा पहिले जवाफ दिन प्रचण्ड अगाडि सरेका थिए । उनले माइक पनि मिलाउन थालेका थिए । तर के कुरा मिलेन प्रचण्डले ओलीतर्फ इसारा गरेर प्रश्नको जवाफ दिन भने ।
धमलाको जवाफमा ओलीले आफ्ना पुरानै वाक्य दोहर्याउँदै आफू र प्रचण्डले अध्यक्ष हुनका लागि एमाले र माओवादीबीच एकता हुन लागेको नभइ देशलाई आर्थिक समृद्धितर्फ लैजान दुई पार्टीबीच निकट भविष्यमै एकीकरण हुन लागेको बताए ।
संसद भवनअगाडि धर्ना दिन पुगेका पहाडीसहित दुईदर्जन अधिकारकर्मी पक्राउ
गोविन्द केसीको अनशनमा कर्णाली सरकार निरीह, काठमाडौं लैजान केन्द्रसँग हारगुहार !
नेकपा एकीकरण : केन्द्रमा 'महासागर', तल तीनथरी 'खोला' !
धरान उपमहानगरपालिकाका प्रमुख सुब्बाको निधन, प्रधानमन्त्रीद्वारा दुःख व्यक्त
माग पूरा नभए सबै अस्पताल बन्द गरिने चेतावनी
पहिरोले पुरिएको बस तीनदिनदेखि निकालिएन रोल्पा- रोल्पाको परिवर्तन गाउँपालिका–६ चप्कामा बाटो माथिबाट आएको पहिरोमा पुरिएको यात्रुबाहक बस अझै निकालिएको छैन । दाङको घोराहीबाट शहीदमार्ग हुँदै रुकुमको चुनवाङ ज...
डा. गोविन्द केसीलाई भेट्न खोज्दा गेटमै रोकिए मुख्यमन्त्री, समर्थकको घेरामा केसी
जाजरकोट कारागार : खल्तीमा पैसा हुनेको मात्रै उपचार
काठमाडौं महानगरपालिकालाई करदातामैत्री बनाउन अभियान
अविश्वास प्रस्तावको सामना गर्ने निर्णय मोदीको कस्तो दाउ ?
जुम्लामा घमासान : गोविन्द केसी विद्यार्थीको घेरामा, सरकारी टोलीलाई निषेध
डा. केसीको अनशनमा गगनको रोइलो किन ?
अग्निपरीक्षामा नेकपा : इमान गुमाएको सत्तापक्ष बन्ने कि गौरवशाली राज्य सञ्चालक ?
- डण्डीप्रसाद शर्मा पूरा पढ्नुहोस